Awudlali lomntwana - yilokho othola khona inkulisa efanele
Indlela yokuthola inkulisa efanele
Thola mayelana nenqubo yokwabela isikhala
Sebenzisa ithuba lokufundela ama-internship futhi uthembele ekuzweni kwakho kwamathumbu
Montessori, inkulisa yesibili noma yobuningi bokuhlanganisa? Ukukhetha inkulisa enkulunga efanele akulula kubazali abaningi. Lokhu kungenxa yokuthi kunzima ukuthola okulungile kumntanakho ngenxa yobuningi bemigomo yemfundo. Ngakolunye uhlangothi, kunelungelo lokuzikhethela inkulisa eJalimane, kodwa lokho akusho ukuthi indawo esiqondisweni esifisayo ikhululekile.
Akuyona umdlalo wengane - yile ndlela othola ngayo inkulisa efanele
Ngaphandle kwalokhu, njengomama noma ubaba, kufanele wazi indlela ongayibona ngayo ikhwalithi yesikhungo sokunakekelwa ngosuku.
Qala ekuqaleni kokusesha enkulisa efanele
Ukukhethwa kwe-enkulisa efanele
Uma ingane yakho ingena enkulisa kusukela eneminyaka emithathu ubudala, ukubhaliswa ngokuvamile kuvame phakathi kukaJanuwari noMashi. Kuze kube ngo-Ephreli, ukwamukelwa noma ukukhansela kuzothunyelwa. Ezikhathini ezizimele noma ezisekela esontweni, lezi zikhathi zokugcina zingase zihluke kancane kulabo abasenkulisa kamasipala.
Uma ungathanda ukuba ingane yakho ilondolozwe esikhungweni sokunakekelwa ngosuku ngaphambi kokuzalwa kwakho okwesithathu, ngoba ufuna ukubuyela emsebenzini ngokushesha, kufanele uqale ukuwufuna okungenani ekuqaleni, kepha okungenani 12 kuya ezinyangeni ze-15 ngaphambi kokuqala komsebenzi.
Kodwa-ke, ngaphambi kokuba ufune inkulisa, kufanele ucabangele okubaluleke kakhulu kuwe ekunakekeleni ingane yakho. Kunengqondo ukucabangela umlingiswa wengane yakho. Izingane ezinamahloni nabanakekelekile, abaye babhekana nakho okuncane nokukhathalela ngaphandle, basesandleni esihle ezinhlanganweni ezincane ezinezinhlangano ezihlala njalo.
Uhlamvu lomntwana wakho lungabalulekile ekukhetheni inkulisa efanele
Uma ingane yakho ikhombisa ukuhlola okukhulu, isibonelo, inkulisa enomqondo ovulekile iyaba umbuzo. Ngaphezu kwalokho, njengomzali, kufanele ucabangele ukuthi yikuphi ukugxila kwezemfundo okubalulekile kuwe. Yonke inkulisa namuhla isebenza ngokusho komqondo othize. Ngokuvamile, lo mbono ungabonwa kwiwebhusayithi yeziko elifanele noma utholakala kubazali abanentshisekelo ukulanda.
Ama-kindergartens amaningi agxila ekukhuthazeni umsebenzi womzimba noma kwimfundo yomculo. Ngaphandle kwalokho, kunezinhlobo ezimbili ze-kindergartens noma labo abanendlela yokufundisa njengeMontessori noma iWaldorf imfundo. Imfundo yezenkolo kanye nokuhlanganisana okuhlobene nemikhuba namagugu angamaKristu kubaluleke kakhulu ezikhungweni zezinhlangano.
Akuyona nje yonke imibuso, kodwa yonke imizi ingazikhethela ukuthi izindawo zontanga zizonikwa kanjani. Ezikoleni zikamasipala, ungabonisa inkulisa yakho oyithandayo efomini lokubhalisa. Okuthandwayo kuvame ukunikezwa ezinganeni zabazali abangabodwa. Kodwa-ke, kuye ngokuthi ubukhulu besixuku, kuya kuziphathimandla zokuphatha ukukunikeza indawo kwenye inkulisa eduze nalapho uhlala khona. Ayikho ilungelo elingokomthetho endaweni yokunakekela izingane esikhungweni esithile. Konke okudingeka kwenziwe kwenziwe ukuqinisekisa ukuthi zonke izingane ziyacatshangelwa uma zibeka izindawo.
Ngisho nomqondo ongcono kakhulu wokufundisa awuzuzi lutho uma umuntu onolwazi ehluleka ukuyisebenzisa ekusebenzeni kwansuku zonke.
Thatha wonke amathuba ukuze ubheke izakhiwo ezibuzwayo. Yenza inothi kusengaphambili izici ozikhathalela ngokukhethekile futhi ubuze endaweni yangakini. Ngolwazi, ungakwazi ukuqhathanisa kangcono indawo ngayinye kamuva bese wenza isinqumo esingcono kakhulu kwengane yakho.
Ngakho-ke, qiniseka ukuthi uletha kanye nezingane zakho uma ubheka izakhiwo ezihlukene: Uzobona ngokushesha ukuthi indodakazi yakho noma indodana yakhe izwa kahle futhi yamukelekile enkulisa noma cha. Isici sokugcina kufanele ngaso sonke isikhathi sibe nokubaluleka okubaluleke kakhulu ekukhethweni kwe-enkulisa.
I-kindergarten enhle ingaqaphela ukuthi isimo esifudumele sithatha futhi izingane nezingane ziphathwa ngokubonga. Ukuxhumana phakathi kwabasebenzi bezemfundo kufanele kuhambisane. Umsebenzi omuhle enkulisa njalo uncike ekutheni ubambiswano phakathi kwethimba lusebenza kanjani.
Lokhu kuthiwa, ukukhanya kungabalulekile. Isikhungo lapho umntwana wakho anakekelwa khona angena ekusebenzisaneni kwezemfundo nawe. Lokhu kusho ukuthi, njengomzali, usebenza ne-enkulisa ukuze uhambe kahle futhi usekele ukuthuthukiswa kwengane yakho. Ngakho-ke buza mayelana namathuba, ukuthi abazali bangabanikela kanjani enkulisa yokuphila kwansuku zonke futhi banake ngokuvakashelwa kwakho kwizaziso nokwaziswa kwesibhamu.
Okokugcina, imishini ye-enkulisa ayiyona into ebalulekile. Akufanele njalo kube yifenisha yamuva, kodwa ingaphakathi elondolozwe kahle futhi elisebenzayo libaluleke kakhulu njengamathoyizi anenjongo. Ngaphezu kokwakhiwa. Izinto zokukhwabanisa nokwakhiwa kufanele zithole imidlalo yebhodi lebhodi, kanye nesitoko, izincwadi zezithombe kanye nemidlalo yemidlalo yemidlalo yokudlala indima.
Njengoba izingane ezineminyaka emithathu zinezidingo ezahlukene kunezingane zasenkulisa, ukudlala okufanelekayo kweminyaka kanye nokunikezwa kokufunda akufanele kube khona, okumele uboniswe. Futhi, thola ukuthi umsebenzi wasenkulisa ubonakala kanjani esikhungweni ngasinye. Ukugqugquzela ukuxhasa ngemali ezindaweni zokuhlushwa, ukutholakala kolwimi nokubhala, ukuzihlanganisa kanye nenqubo yokuthuthukiswa kwengqondo kubalulekile.
Enkulisa enhle, yonke imibuzo yakho kufanele iphendulwe ngesineke nangemininingwane. Uma kungenjalo, kufanele uqhubeke nokufuna: Ukunakekelwa kwezingane okuhle kungasebenza kuphela uma zonke izinhlangano zisebenza ukuze kuzuze ingane futhi wena njengomzali ungakha ukwethemba esikhungweni esinjengesikole.
Ngithola kanjani i-bra elungile | Imfashini yowesifazane
Amaphutha izingane - thola umehluko
Ubuhle - ingabe esesweni lombukeli?
Uluhlobo luni lothando?
Izinongo ze-Grill - Uma ugwaza izinongo ezilungile
Ukudla kwasekuseni okunempilo ye-enkulisa nesikole | ukudla
Kungani inkulisa? | Inkulana nemfundo
Ukuguqulwa kusuka enkulisa kuya esikoleni
Isipho sokugqoka Umfundisi enkulisa
Inkulana & Isikole - Ukukhushulwa Kwengane Ekuqaleni